Sawirro: Dowladda Jabuuti oo Maanta Deeq Lacageed ku wareejisay Guddiga Gurmadka Qaran ee Musiibadii Zoobe – Kismaayo24 News Agency
Sawirro: Dowladda Jabuuti oo Maanta Deeq Lacageed ku wareejisay Guddiga Gurmadka Qaran ee Musiibadii Zoobe
by admin 20th November 2017 056
Dowladda Jabuuti ayaa Maanta Deeq lacageed ku wareejisay Guddiga gurmadka Qaran taasi oo loogu tala galay dadkii waxyeelada kasoo gaadhay musiibadii qaran ee 14-kii October ka dhacday Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho.
Deeqdaan lacageed oo cadadkeeda ay gaareyso 1 Milyan oo dollar ayaa lagu wareejiyay Guddiga gurmadka qaran.
” Dawladda Jabuuti ee aan walaalaha nahay waxaan uga mahad-celinayaa doorkeeda Soomaaliya iyo lacagta ay ugu deeqeen dadkii Soomaaliyeed ee wax-yeelladu ka soo gaartay Qaraxii Zoobe” ayuu yiri Ra’isul wasaare kheyre.
Update: Wararki ugu dambeeyay Rabshado xoogan oo ka bilowday Dalka Kenya iyo Mucaaradka oo….
Daawo: Waaxda Gargaarka iyo Hay’adda Maareynta Musiibooyinka ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo maanta loo wareejiyey Wasaaradda …..
Dhagayso:- Gabar Suxufiyad ah oo ka sheekeesay Qaabka ay uga badbaaday Weerar lagu khaarijin Rabay
War cusub: Maxaadan ogeyn oo ka soo baxay kulan dhexmaray general xaamud iyo saraakiil ka socota talyaaniga?+Sawirro